Wararka - Daraasad cusub ayaa sheegaysa in cuntada vegan ay si isku mid ah caafimaadka ugu tahay xayawaanka rabaayada ah
Daraasad cusub ayaa sheegtay in cuntada vegan ay si isku mid ah caafimaadka ugu tahay xayawaanka rabaayada ah
Marka loo eego daraasad rajaynaysa in ay kor u qaaddo cuntooyinka dhirta ku salaysan ee xayawaanka rabaayada ah, cuntada vegan ee bisadaha iyo eyda waxay noqon kartaa mid caafimaad leh sida cuntada hilibka.
Cilmi-baaristan waxay ka timid Andrew Knight, oo ah borofisar ku takhasusay caafimaadka xoolaha ee Jaamacadda Winchester.Knight wuxuu sheegay in marka la eego natiijooyinka caafimaadka qaarkood, cuntooyinka dhirta ku salaysan ayaa laga yaabaa inay ka fiicnaadaan ama xitaa ka fiican yihiin cuntooyinka xayawaanka ah ee hilibka, inkastoo nafaqooyinka synthetic ay lagama maarmaan u yihiin dhamaystirka cuntada.
Boqortooyada Midowday (UK), oo ay ku taal Jaamacadda Winchester, mulkiilayaasha xayawaanka ah ee ku guuldareysta inay ku quudiyaan xayawaankooda "cunto habboon" waxaa laga yaabaa in lagu ganaaxo in ka badan $27,500 ama lagu xiro sharciga daryeelka xayawaanka ee 2006.Sharcigu ma qeexayo in cunnooyinka khudradda ama khudradda aanay habboonayn.
Justine Shotton, oo ah Madaxa Ururka Dhakhaatiirta Xoolaha ee Ingiriiska, ayaa yiri: "Kuma talineyno in eeyaha lagu quudiyo cunno khudradeed, sababtoo ah dheellitirka nafaqeynta ee khaldan ayaa aad uga sahlan midka saxda ah, taas oo keeni karta cunto yari iyo khatarta cudurrada la xidhiidha." , U sheeg Hill.
Khubarada caafimaadka xoolaha ayaa sheegaya in xayawaanku ay u baahan yihiin cunto isku dheeli tiran oo laga yaabo inay qabaan baahiyo nafaqo oo gaar ah, cunnada vegan-na lagama yaabo inay buuxiso baahiyahan.Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka cilmi-baarista Knight waxay muujinayaan in cuntooyinka xayawaanka ku salaysan ee dhirta ay nafaqo ahaan u dhigmaan alaabooyinka ka kooban hilibka.
"Eyda, bisadaha iyo noocyada kale waxay leeyihiin baahiyo nafaqo.Uma baahna hilib ama maaddooyin kale oo gaar ah.Waxay u baahan yihiin tiro nafaqeeyayaal ah, ilaa iyo inta lagu siinayo cunto macaan oo ku filan, waxay yeelan doonaan dhiirigelin inay cunaan oo ay fududahay in la dheefshiido.Waxaan rabnaa in aan aragno iyaga oo baraaraya.Tani waa waxa caddayntu u muuqato in ay muujinayso," Knight ayaa u sheegay Guardian.
Sida laga soo xigtay Hill, inkasta oo eeyadu yihiin omnivores, bisadaha waa hilib-jir, cuntadoodana waxay u baahan yihiin borotiinno gaar ah, oo ay ku jiraan taurine.
Sida laga soo xigtay Washington Post, 180 milyan oo xayawaan ah oo ku nool guryaha Maraykanka ayaa cuna hilibka lo'da, wananka, digaaga ama hilibka doofaarka ku dhawaad ​​cunto kasta, sababtoo ah gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ka soo baxa xanaanada xoolaha ayaa ah 15% qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda California, Los Angeles ayaa ku qiyaasay in eeyaha iyo bisadaha ay leeyihiin ilaa 30% saamaynta deegaanka ee cunista hilibka ee Maraykanka.Sida laga soo xigtay "Washington Post", haddii xayawaanka Maraykanku ay sameystaan ​​​​wadankooda, cunnadooda hilibku waxay ku jiri doontaa darajada shanaad ee adduunka.
Sida laga soo xigtay sahan ay samaysay Petco, shirkado badan oo ka mid ah cuntooyinka xayawaanka ayaa bilaabay inay horumariyaan beddelaadyada cayayaanka ku salaysan ee eyda iyo bisadaha, iyo 55% macaamiisha waxay jecel yihiin fikradda isticmaalka maaddooyinka borotiinka beddelka ah ee cuntada xayawaanka.
Illinois dhawaan waxay noqotay gobolka shanaad ee ka mamnuuca dukaamada xayawaanka ah inay ka iibiyaan eyda iyo bisadaha kuwa dhaqda, in kasta oo loo ogol yahay inay martigeliyaan dhacdooyinka korsashada bisadaha iyo eeyaha xarumaha hoyga xayawaanka iyo ururada samatabbixinta.Sharcigu waxa uu rajeenayaa in la joojiyo feedlots-ka ee bixiya bakhtiyaa-nasiibka inta badan xoolaha weheliya ee lagu iibiyo dukaamada.
Shepard Price waxa uu shahaadada sare ee saxaafadda ka qaatay Jaamacadda Texas wuxuuna ku nool yahay St. Louis.Waxay saxaafadda ku jireen in ka badan afar sano.
Waqtiga boostada: Oct-23-2021
Khadka Soo saarista Baasto Cusub Khadka waxsoosaarka qashinka barafaysan Pizza Cajiinka Mixer Machine Khadka Waxsoosaarka Raashinka Xoolaha Khadka Waxsoosaarka Cuntada Eeyga Khadka Wax soo saarka Raashinka Raashinka Raashinka ah